Ciidamada Ukraine ayaa sheegay in Axadii ay ugu badneyd duqeynta dhankasta ah | Arrimaha Bulshada
Home News Ciidamada Ukraine ayaa sheegay in Axadii ay ugu badneyd duqeynta dhankasta ah
Ciidamada Ukraine ayaa sheegay in Axadii ay ugu badneyd duqeynta dhankasta ah
Bulsha:- Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa kulan deg deg ah ka yeelanaya duulaanka Ruushka ee Ukraine maanta oo Isniin ah. Talaabadan ayaa ku soo beegantay iyadoo Midowga Yurub uu ku soo rogay Kremlin-ka tilaabooyin adag oo cusub oo ay ka mid tahay in hawada Midowga laga mamnuucay dhammaan duullimaadyada Ruushka, iyadoo laga digayo masiibo bini’aadantinimo oo soo wajahda dadkii ku barakacay colaadaha.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Axaddii u codeeyay in la qabto kalfadhi gaar ah oo degdeg ah oo naadir ah oo ay yeelanayaan 193-da xubnood ee Golaha loo dhan yahay, kaasoo looga hadlayo duulaanka Ruushka ee Ukraine Isniintii.
Hogaamiyeyaasha Midowga Yurub ayaa Axaddii ku dhawaaqay cunaqabatayn adag oo cusub oo ka dhan ah Ruushka, sida in hawada Midowga Yurub oo dhan laga xidho diyaaradaha Ruushka, oo ay ku jiraan diyaaradaha gaarka ah ee ay isticmaalaan oligarchs iyo mamnuucidda warbaahinta dawladda Ruushka.
Isagoo ka garab hadlaya Josep Borrell, madaxa siyaasadda arrimaha dibedda ee Midowga Yurub, madaxa guddiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa tiri RT iyo Sputnik “ma awoodi doonaan inay faafiyaan beentooda si ay u caddeeyaan dagaalka Putin ayna ku abuuraan kala qaybsanaan midawgeenna.”
Von der Leyen ayaa sidoo kale sheegay in kooxdu ay qaadi doonto tallaabo aan horay loo arag oo ah in lagu maalgeliyo 450 milyan oo Yuuro oo hub ah Ukraine iyo soo rogida xannibaadaha dhoofinta ee xulafada Ruushka ee Belarus. Guddoomiyaha Yurub ee Gargaarka Bini’aadantinimada iyo Maareynta Xasaradaha, Janez Lenarcic, ayaa tiri ka dib kulan gaar ah oo ka dhacay Brussels Axadii.
In ka badan 368,000 oo Yukreeniyaan ah ayaa horay u qaxay, badidood waxay tageen Poland iyo Moldova, sida ay sheegtay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga. Axadii, Ukraine waxay sheegtay inay wadahadal la yeelan doonto Ruushka xadka uu la wadaago Belarus.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa amar ku bixiyay in Ruushka laga dhigo Nukliyeer. Xoogaga ka hortagga ayaa heegan sare ku jira Axadda, iyagoo tixraacaya “hadallada gardarada ah” ee awoodaha NATO iyo cunaqabatayn dhaqaale oo adag, Aqalka Cad ayaa sheegay in Putin “uu hanjabaado” u jeedinayo arrinta halka madaxa NATO Jens Stoltenberg uu dhaleeceeyay Putin “hadallada khatarta ah,” isagoo raaciyay: “Tani waa dhaqan aan mas’uul ahayn.” Lasoco barta tooska ah ee hoose Haddii wax cusub aysan soo bixin